ငှကျပြောခှံ အသုံးပွုနညျး လှို့ဝှကျခကျြ ၁၀မြိုး - Latest Myanmar News
ငှကျပြောခှံ အသုံးပွုနညျး လှို့ဝှကျခကျြ ၁၀မြိုး
January 20, 2021 by Latest Myanmar News
စိုကျပြိုးရေး အတှကျ ငှကျပြောသီးခှံ အသုံးဝငျပုံ (၁၀)မြိုး
သီးမှေး၊ ဖီးကွမျး၊ ရခိုငျ၊ ဝကျမလှတျ ပှဲထဲက ငှကျပြောသီးပါမကနျြ သူ့အရသာလေးနဲ့ သူကောငျးလို့မှနျလို့ စားကွတယျ။ အိမျနီးနားခငျြးတှကေို ဝကွေပါတယျ။
အမယျ..ဦးရှငျကွီးတငျလို့ စားရတဲ့ မုနျ့ဆမျးနဲ့ ငှကျပြောသီးလေးဆို ကောငျးလှနျးလို့။ အသီးကပဲ စားကောငျးတာမဟုတျပါဘူး။
သူ့အခှံကလညျး အသုံးဝငျတယျဆိုတာ သိစခေငျြပါတယျ။
(၂) အပိုငျးအစလေးတှေ မွကွေီးထဲ ထညျ့ပေးလို့ရတယျ။
စုထားတဲ့ငှကျပြောခှံတှရှေိတယျဆိုရငျ ၅ ခကျြ ၆ ခကျြလောကျ ခုတျထဈပွီးတော့ စိုကျထားတဲ့ ခွံထဲ၊ ဥယြာဉျထဲကို တိုကျရိုကျထညျ့ပေးလို့ရပါတယျ။ မွကွေီးတော့ ပွနျဖုံးပေးခဲ့ဖို့ လိုအပျပါတယျနျော။
တဖွညျးဖွညျး ဆှေးရငျးနဲ့ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓာတျတှကေို ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။
အခငျးထဲ တိုကျရိုကျမထညျ့ခငျြဘူးဆိုရငျ မွဆှေေးပုံပုံပွီးတော့ သုံးတဲ့နရောမှာ ငှကျပြောခှံတှပေါထညျ့ပွီးတော့ မွဆှေေးပွုလုပျလို့ရပါတယျနျော။ ငှကျပြောခှံနဲ့လုပျထားတဲ့ မွဆှေေးတှေ ကောငျးကောငျးဆှေးပွီဆိုရငျ ပြိုးဘောငျလုပျတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ၊ အပငျတှပေနျးပှငျ့တဲ့အခြိနျမြိုးတှမှော သုံးပေးလိုကျရငျ အပငျတှကေ အာဟာရတှေ အမြားကွီးရလာမှာပါ။
ငှကျပြောခှံတှေ အမြားကွီးရှိနတေယျဆို နရေောငျအောကျမှာ အခွောကျခံလိုကျပါ။ ကောငျးကောငျးခွောကျသှားရငျ အမှုနျ့ကွိတျပွီးတော့ မွကွေီးထဲကို ထညျ့ပေးလို့ရပါတယျ။
သတိထားရမှာတဈခကျြက အမွဈကိုမထိအောငျ ထညျ့ပေးလိုကျပါ။ အိုးတှမှောဆို ဖွူးထညျ့လိုကျရုံပါပဲ။
(၅) အစစေို့ကျရငျ ထညျ့ပေးလို့ရ
ငှကျပြောခှံမှုနျ့ (၄) ဇှနျး၊ ကွကျဥခှံ (၃)ခုရဲ့ အမှုနျ့ရယျ၊ အကျပဆှနျ ဆားတဈဇှနျးကို ရသေနျ့ဘူးအရှယျအစားထဲထညျ့ပွီး ရအေပွညျ့ဖွညျ့ပွီး အပငျတှကေိုဖနျြးပေးလို့ရပါပွီ။ ကယျလျစီယမျ၊ မဂ်ဂနီစီယမျနဲ့ ပိုတကျစီယမျကွှယျဝတဲ့ ရှကျဖနျြးမွသွေဇာပါပဲ။
ပနျးသီးရှာလကာရညျထဲကို ငှကျပြောသီးခှံလေးထညျ့ပွီး အငျးဆကျထောငျခွောကျ လုပျလို့ရပါတယျ။ ခွံထဲထညျ့ထားရငျ မှကျတှကေို အမြားကွီးလြော့ခနြိုငျပါတယျ။
ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတော့ အဖုံးပါတဲ့ ကျောခှကျလေးတှထေဲကို ငှကျပြောခှံနဲ့ ပနျးသီးရှာလကာရညျထညျ့၊ ဘေးပတျပတျလညျမှာ အပေါကျလေးတှေ ဖောကျထား။
အဖုံးလေးပွနျပိတျထား။ အဲ့လိုဆို မှကျမြိုးနှယျဝငျ အုပျစုတှကေ ထောငျခွောကျမှာမိပွီး အပငျတှကေို ကာကှယျနိုငျတာပေါ့။
ငှကျပြောခှံကို ရနေဲ့အခဉျြဖောကျပွီး ပနျးပှငျ့တဲ့အပငျတှကေို ဖနျြးပေးရငျ ပနျးပှငျ့တှေ အမြားကွီး ကွီးကွီး လှလှ ပှငျ့လာမှာပါ။
ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုရငျ ဖုံးလို့ရတဲ့ပုလငျးထဲ ငှကျပြောခှံထညျ့၊ ပွီးတော့ ရမွေုပျနအောငျထညျ့ပွီး အဝတျကလေးနဲ့ ပိတျထား၊ တဈပတျလောကျစောငျ့ရပါမယျ။
အမွုပျဖွူလေးတှထေလာရငျ အဆငျပွပေါတယျ။ အမွုပျတှကေ မဲနမေယျ။ မှိုတှတေကျလာတယျဆိုရငျတော့ လှငျ့ပဈလိုကျပါ။ အရညျကိုလောငျးလို့ရပါတယျ။
အဖတျတှကေိုကွိတျပွီးတော့ မွကွေီးထဲ ထညျ့ပေးလို့ရပါတယျ။ ကဲ ဘာလိုသေးလဲ?
ငှကျပြောခှံကို ရနေဲ့စိမျပွီးတော့ ငှကျပြောခှံရှာလကာရညျ လုပျရမှာပါ။ ရနေဲ့ စိမျတာတူတူပါပဲ။ တဈပတျကွာရငျ အဖတျတှဆေယျပွီး ရကေိုပဲ (၄)ပတျကနေ (၆)ပတျလောကျ ထားရမှာပါ။
ရှာလကာရညျလို အနံ့လေးထှကျတယျ။ တူလာပွီဆိုရငျ ရနေဲ့ ထပျရောပွီး အပငျလေးတှကေို လောငျးပေးပါ။
စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ငှက်ပျောသီးခွံ အသုံးဝင်ပုံ (၁၀)မျိုး
သီးမွှေး၊ ဖီးကြမ်း၊ ရခိုင်၊ ဝက်မလွတ် ပွဲထဲက ငှက်ပျောသီးပါမကျန် သူ့အရသာလေးနဲ့ သူကောင်းလို့မွန်လို့ စားကြတယ်။ အိမ်နီးနားချင်းတွေကို ဝေကြပါတယ်။
အမယ်..ဦးရှင်ကြီးတင်လို့ စားရတဲ့ မုန့်ဆမ်းနဲ့ ငှက်ပျောသီးလေးဆို ကောင်းလွန်းလို့။ အသီးကပဲ စားကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။
သူ့အခွံကလည်း အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။
စားနေကြတဲ့ ငှက်ပျောသီးခွံကို စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လိုသုံးလို့ ရနေတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ ငှက်ပျောသီးကျွေးပြီးရင် အခွံလေးပြန်တောင်း ပြန်စုကြပါ။
(၁) ငှက်ပျောခွံ အရည်
မြေဆွေးအရည်လိုမျိုးပဲ ငှက်ပျောသီးအခွံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ငှက်ပျောခွံရည်ဆိုတာကို ရွက်ဖျန်းအားဆေးအဖြစ် ပက်ဖျန်းပေးလို့ရပါတယ်။ အပင်တွေကို လောင်းပေးလို့ရပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျတော့ ရေနဲ့ (၂) ရက် (၄၈ နာရီ) ထားပြီးရင် အဲ့ငှက်ပျောခွံရည်နဲ့ အပင်တွေကို လောင်းပေးလို့ရပါတယ်။ အာဟာရတွေကို ပိုရလာအောင် ငှက်ပျောခွံတွေက ကူညီပေးပါတယ်။
(၂) အပိုင်းအစလေးတွေ မြေကြီးထဲ ထည့်ပေးလို့ရတယ်။
စုထားတဲ့ငှက်ပျောခွံတွေရှိတယ်ဆိုရင် ၅ ချက် ၆ ချက်လောက် ခုတ်ထစ်ပြီးတော့ စိုက်ထားတဲ့ ခြံထဲ၊ ဥယျာဉ်ထဲကို တိုက်ရိုက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ မြေကြီးတော့ ပြန်ဖုံးပေးခဲ့ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။
တဖြည်းဖြည်း ဆွေးရင်းနဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) မြေဆွေးပုံရင် သုံးလို့ရတယ်။
အခင်းထဲ တိုက်ရိုက်မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင် မြေဆွေးပုံပုံပြီးတော့ သုံးတဲ့နေရာမှာ ငှက်ပျောခွံတွေပါထည့်ပြီးတော့ မြေဆွေးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်နော်။ ငှက်ပျောခွံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ မြေဆွေးတွေ ကောင်းကောင်းဆွေးပြီဆိုရင် ပျိုးဘောင်လုပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ၊ အပင်တွေပန်းပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ သုံးပေးလိုက်ရင် အပင်တွေက အာဟာရတွေ အများကြီးရလာမှာပါ။
ငှက်ပျောခွံတွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆို နေရောင်အောက်မှာ အခြောက်ခံလိုက်ပါ။ ကောင်းကောင်းခြောက်သွားရင် အမှုန့်ကြိတ်ပြီးတော့ မြေကြီးထဲကို ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။
သတိထားရမှာတစ်ချက်က အမြစ်ကိုမထိအောင် ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ အိုးတွေမှာဆို ဖြူးထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
(၅) အစေ့စိုက်ရင် ထည့်ပေးလို့ရ
မျိုးစေ့စိုက်မယ်ဆို ငှက်ပျောခွံကို တိုက်ရိုက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။ မြောင်းလေးတူး၊ ငှက်ပျောခွံလေးတွေခင်း ပြီးတော့ အစေ့လေးတွေချ၊ မြေပြန်ဖုံးခဲ့။ အမြစ်လေးတွေ စထွက်တဲ့အချိန်၊ အပင်လေးတွေ ကြီးလာတဲ့အချိန်မျိုးတွေဆို သူက အာဟာရတွေ ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ မြေသြဇာကြီးအဖြစ်နဲ့ အသုံးတော်ခံလို့ပေါ့။
(၆) ငှက်ပျောခွံရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ
ငှက်ပျောခွံမှုန့် (၄) ဇွန်း၊ ကြက်ဥခွံ (၃)ခုရဲ့ အမှုန့်ရယ်၊ အက်ပဆွန် ဆားတစ်ဇွန်းကို ရေသန့်ဘူးအရွယ်အစားထဲထည့်ပြီး ရေအပြည့်ဖြည့်ပြီး အပင်တွေကိုဖျန်းပေးလို့ရပါပြီ။ ကယ်လ်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်နဲ့ ပိုတက်စီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာပါပဲ။
(၇) အင်းဆက်တွေ ဖမ်းမယ်။
ပန်းသီးရှာလကာရည်ထဲကို ငှက်ပျောသီးခွံလေးထည့်ပြီး အင်းဆက်ထောင်ခြောက် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ခြံထဲထည့်ထားရင် မှက်တွေကို အများကြီးလျော့ချနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ အဖုံးပါတဲ့ ကော်ခွက်လေးတွေထဲကို ငှက်ပျောခွံနဲ့ ပန်းသီးရှာလကာရည်ထည့်၊ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ အပေါက်လေးတွေ ဖောက်ထား။
အဖုံးလေးပြန်ပိတ်ထား။ အဲ့လိုဆို မှက်မျိုးနွယ်ဝင် အုပ်စုတွေက ထောင်ခြောက်မှာမိပြီး အပင်တွေကို ကာကွယ်နိုင်တာပေါ့။
အပင်ခြေရင်းမှာ ငှက်ပျောခွံအစတွေကို တင်ထားပေးရင် ပျတွေမတက်တော့ပဲ အပင်ကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ငှက်ပျောခွံကို ပျတွေက မုန်းကြပါတယ်။
ငှက်ပျောခွံကို ရေနဲ့အချဉ်ဖောက်ပြီး ပန်းပွင့်တဲ့အပင်တွေကို ဖျန်းပေးရင် ပန်းပွင့်တွေ အများကြီး ကြီးကြီး လှလှ ပွင့်လာမှာပါ။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင် ဖုံးလို့ရတဲ့ပုလင်းထဲ ငှက်ပျောခွံထည့်၊ ပြီးတော့ ရေမြုပ်နေအာင်ထည့်ပြီး အဝတ်ကလေးနဲ့ ပိတ်ထား၊ တစ်ပတ်လောက်စောင့်ရပါမယ်။
အမြုပ်ဖြူလေးတွေထလာရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ အမြုပ်တွေက မဲနေမယ်။ မှိုတွေတက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ အရည်ကိုလောင်းလို့ရပါတယ်။
အဖတ်တွေကိုကြိတ်ပြီးတော့ မြေကြီးထဲ ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ ကဲ ဘာလိုသေးလဲ?
စတော်ဘယ်ရီတို့လို အက်ဆစ်ကြိုက်တဲ့အပင်တွေ အချဉ်ဓာတ်လေးကြိုက်တဲ့ အပင်တွေကို ဖျန်းပေးရင် အရွက်ဖားဖားနဲ့ ပိုသန်စွမ်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ငှက်ပျောခွံကို ရေနဲ့စိမ်ပြီးတော့ ငှက်ပျောခွံရှာလကာရည် လုပ်ရမှာပါ။ ရေနဲ့ စိမ်တာတူတူပါပဲ။ တစ်ပတ်ကြာရင် အဖတ်တွေဆယ်ပြီး ရေကိုပဲ (၄)ပတ်ကနေ (၆)ပတ်လောက် ထားရမှာပါ။
ရှာလကာရည်လို အနံ့လေးထွက်တယ်။ တူလာပြီဆိုရင် ရေနဲ့ ထပ်ရောပြီး အပင်လေးတွေကို လောင်းပေးပါ။
Categories စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ Post navigation
သိထားသငျ့တဲ့ လှိမျ့ဝငျတညျသုံးယတွာ အကွောငျး ..
အတကျ ရောဂါ အတှကျ ဆေးနညျးလေးမြား